360 Celsius FPV UNCUT 53 nkeji ihe ntụrụndụ Quintus M nwere nku 8,90, nwee obi ụtọ. - Modellpilot.EU
Home dị iche iche Onyinye nka na ụzụ 360 Celsius FPV UNCUT nkeji 53 nke ntụgharị obi ụtọ Quintus M nwere nku 8,90, nwee obi ụtọ.
Video gara aga Quintus 8,85 m - thermals crank - banye na temume dị nso na ala, fefee, looping, vario
Video nke ozo MIG-15 ROD SNYDER TEAM USA RC TURBINE JET WM
1. November 2019 - LUD: 5. October 2020
[Ọnụ: 9 Nkezi: 5]
Nke a bụ vidiyo vidiyo 53 ° 360 nke ekwesighi ka nke ụgbọ elu Triangle GPS.
Na obere ihe dị ala na 20:41 min. ka a na-erute nnukwu eb28 site na paritech.
Bugharịa cursor ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka gị / mbadamba gị na ngalaba onyonyo achọrọ. Nwee anụrị
Tags 360360 ° vidiyo4Kụgbọ elu ikuku na-achịkwaGPS triangleMessenModelingModel na-efe efeFlightgbọ elu ụgbọ eluụgbọ elu igweOnyeka OnwenuRCụgbọ elu rcrc nlereanyareviewsihe